केपी शर्मा ओलीको मन्त्रिपरिषदमा वन तथा वातावरणमन्त्री बनेका नारदमुनि रानाको नाममा रहेको रातो पासपोर्ट अष्ट्रेलियाको सिड्नीमा फेला परेको छ । तर, उनको पासपोर्टमा यात्रा गरेका व्यक्ति भने अझैसम्म गुमनाम छन् । ती व्यक्ति १० वर्षअघि अष्ट्रेलिया पुगेपछि गुमनाम बनेका हुन्
विशेष स्रोतले रातोपाटीलाई उपलब्ध गराएको मन्त्री रानाको १० वर्षअघिको कूटनीतिक पासपोर्टमा जन्म मिति १९७२ जुलाई १७ लेखिएको छ । पासपोर्ट नम्बर ०२१२४४ रहेको छ । तत्कालीन सभासद रानाको उक्त कूटनीतिक राहदानीको म्याद एक वर्षे रहेको थियो । सन् २०१० सेप्टेम्बर १९ मा बनेको पासपोर्टको म्याद २०११ सेप्टेम्बर १८ मा सकिएको थियो ।
गोपनीयतासम्बन्धी कानून निकै कडा रहेको अस्ट्रेलियामा यात्रा गरेका व्यक्तिको बारेमा थप जानकारी लिन सम्भव नभएको भन्दै नेपालको सुरक्षा स्रोतले ती व्यक्ति अस्ट्रेलियामा अर्कै नाम र पहिचानसहित स्थापित भैसकेको हुन सक्ने बतायो .
सन् २०१० ताका नेपालमा ज्यान जोखिममा परेको भन्दै शरणार्थीका रुपमा कतिपय मानिसहरु अष्ट्रेलिया र युरोपमा देशहरुमा जाने गरेका थिए । रानाको राहदानी किनेका व्यक्ति पनि मानव तस्करको सहयोगमा अस्ट्रेलिया आउन सफल भएको स्रोतले बतायो ।
मानव तस्करले रानालगायत अन्य सांसदहरुको पनि कूटनीतिक पासपोर्ट किनेर बेचेको र विभिन्न व्यक्तिलाई अस्ट्रेलिया तथा क्यानडा पठाएको अनुसन्धानबाट देखिएको छ । नारदमुनि रानाजस्तै तत्कालीन सांसद शिव पुजन राय यादवको पनि रातो पासपोर्ट अष्ट्रेलियामै फेला परेको छ ।
अस्ट्रेलियामा विगत दुई दशकदेखि कानून व्यवसाय गर्दै आएका प्रथम नेपाली कानून व्यवसायी डा. शमशेर सिंह थापाले विगतमा नेपालका नेताहरुले रातो पासपोर्ट बनाएर बेच्ने गरेको खबर सत्य भएको बताए । उनले भने, खोजी गर्ने हो भने एक/दुई होइन, दर्जनौ र सयौं त्यस्ता घटनाहरु भेटिन सक्छन् ।
तत्कालीन सभासद राना र यादवको पासपोर्टमा फोटो टाँसेर दुई व्यक्तिहरु अष्ट्रेलिया पस्न सफल भए पनि तत्कालीन सभासद वीपी यादव र गायत्री साहको पासपोर्टमा अष्ट्रेलिया हिँडेका दुई व्यत्तिहरु भने अबुधाबी विमानस्थल बाटै नेपाल फर्काइएका थिए ।
रातो पासपोर्ट बिक्री गरेको अभियोगमा नारदमुनि राना र अन्य सभासद विरुद्ध रानाविरुद्ध अख्तियार र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले बेग्लाबेग्लै अनुसन्धान गरेका थिए । यसक्रममा रानालाई प्रहरीले पक्राउसमेत गरेको थियो । पछि उनलाई विशेष अदालतले सफाइ दिएको थियो । रातोपाटिबाट साभार